umnyango wobakaki wasekhaya Factory | I-china umnyango wobakaki wasendlini Abenzi, abahlinzeki
Isibani sobakaki esingu-14W 28W 18W esine-reflector
Ukubukeka kwelungelo lobunikazi, isitayela senoveli, isibambi sesibani sisebenzisa ukusika nokuzungezisa, ukuthintana kwendandatho okuqinile, kuphephile futhi kunokwethenjelwa. Isiphathi sesibani sisebenzisa isibani sekhanda esisodwa, i-250V, ipulasitiki yobunjiniyela yekhwalithi ephezulu, amandla aphezulu emishini, uhlobo olujikelezayo lwe-radial propulsion, ukusebenza okuhle koxhumana naye. Ifanele ukukhanyisa iwodi, igumbi lokucwaninga, indawo yokusebenzela ehlanzekile esezingeni eliphakeme, njll.
Isigaba 1 14W 18W 28W isibani esikhanyayo se-fuji bracket
Patent ukubukeka, isitayela inoveli, isibani umnikazi usebenzisa ukusika futhi ligijima, ephephile futhi ethembekile. Isiphathi sesibani sisebenzisa isibani sekhanda esisodwa, i-250V, ipulasitiki yobunjiniyela yekhwalithi ephezulu, amandla aphezulu emishini, uhlobo olujikelezayo lwe-radial propulsion, ukusebenza okuhle koxhumana naye. Ifanele ukukhanyisa iwodi, igumbi lokucwaninga, indawo yokusebenzela ehlanzekile esezingeni eliphakeme, njll.
isibani esinamandla esingenalo uthuli 14W 28W 35W i-prism cover cover bracket light
Ukubukeka kwe-Patent, isitayela senoveli, isibambi sokukhanya sisebenzisa ukusika nokujikisa, ukuxhumana kwendandatho okuqinile, kuphephile futhi kunokwethenjelwa. Umnikazi wesibani sekhanda elilodwa, i-250V, ipulasitiki yobunjiniyela yekhwalithi ephezulu yekhwalithi ephezulu, amandla aphezulu wemishini, uhlobo lwe-radial propulsion rotary, ukusebenza okuhle koxhumana naye. Ulayini wokukhanya webakaki we-prism uthambile futhi uzinzile, unezici zothuli oluphansi nokubukeka okuhle, okufanele umcimbi wezidingo zokukhanya okuphezulu.
Ubani wobakaki wobufakazi obunamanzi obunobufakazi bamanzi
Amalambu afaniswa nesigaba se-IP65. Idizayini yokufaka uphawu engenamanzi, engenawo umswakama, isakhiwo esinengqondo, esihle futhi esivulekile, ukuklanywa kokukhiya kusebenziseka kalula, kulula ukufaka nokugcina. Isiphathi sekhanda elilodwa lesibani, i-250V yekhwalithi ephezulu yelangabi epulasitiki yobunjiniyela, amandla aphezulu womshini, ububanzi nokuphakama okuqhubela uhlobo lokujikeleza, ukusebenza okuhle koxhumana naye. Idizayini yenoveli, isakhiwo esihlanganisiwe, ukubukeka okuhle, okulula ukufaka nokugcina, ukuqala okusheshayo. Ifanele izindawo ezingaphandle nezingaphandle ezinemfuneko yokungenwa ngamanzi, ubufakazi bokuthuli kanye nobumswakama.